Zvibereko Muto Muchina Vagadziri & Vatengesi - China Zvibereko Muto Muto Machine
Carbonated chinwiwa uye soda chinwiwa prodution muchina unoreva chinwiwa chakazadzwa necarbon dioxide pasi pemamwe mamiriro.
yakachena mvura prodution muchina kuyerera: Mbishi mvura → mbishi yemvura tangi → booster pombi → quartz jecha firita → yakamisikidzwa kabhoni firita → ion softener → chaiyo firita → reverse osmosis → ozone sterilizer → yakachena tangi remvura → yakachena pombi yemvura → kuwacha bhodhoro, kuzadza nekukora yekuzadza mutsara → kuendesa → mwenje
Iyo huru maitiro eChikafu chakakangwa muchina uye yekugadzira mutsara: Raw zvinhu kusarudzwa → Pre-kurapwa → Kugadzira → Kuchenesa chisimbiso → Kupora uye kutonhora → Insulation kuongorora → Package chengetedzo
Michero nemiriwo kuomesa uye kurongedza mutsetse wakazara mbishi zvigadzirwa: michero mitsva uye magegeetabels, semadomasi, chili, hanyanisi, mango, mapainini, magwavha, mabhanana,
Yogati imhando yemukaka chinwiwa nekutapira uye kwakasviba kuravira. Imhando yechigadzirwa chemukaka chinotora mukaka sechinhu chisina kugadzirwa, chakasanganiswa uye ndokuzowedzerwa nemabhakitiriya anobatsira (kutanga) kumukaka.
Muchero muchero chinwiwa imhando yechinwiwa chakagadzirwa kubva muchero mutsva. Muto wezvibereko zvakasiyana une mavitamini akasiyana nezvimwe zvinovaka muviri, uye inoonekwa sechinwiwa chine hutano. Nekudaro, kushomeka kwayo kwese fiber uye neshuga yakakwira yezvibereko dzimwe nguva kunoonekwa sekukanganisa kwayo.